समाजको हिरासतमा रहेको एउटा घरको कथा | ईमाउण्टेन समाचार
मंसिर २६, २०७८ पढ्न ५ मिनेट
महोत्तरी । बर्दिबास नगरपालिका–१४ स्थित सुभम बस्तीमा जाने गल्लीको अली पर पुगेपछि दायाँतर्फ देखिने एउटा भव्य घरले जोकोहीलाई झसङ्ग बनाउँछ । घर नजिकै गएपछि भित्र खरानी नै खरानी छ । मानाैँ यो मुर्धाघर हो, जहाँ दाहसंस्कारको लागि यही घरलाई प्रयोग गरिन्छ । अगाडिपट्टी दुईवटा सटर छन् । सटरभित्र जलेका बोतल र सिसाहरू देखिन्छन् । दिउँसै अँध्यारो र भग्नावशेष देखिने यो घर किन यति डरलाग्दो छ ? बस्तीको बीचमा पनि यो घरले वरपरका मानिसलाई त्रसित बनाइरहेको ? यो घरबाट आवतजावत गर्ने जोकोहीमा यस्तै विभिन्न प्रश्न उब्जन्छ ।
तर, घरको दायाँबायाँ ठूला अक्षरले लेखिएको छ– यो अपराधीको घर हो । यो घर किनबेच गर्न पाइँदैन । बर्दिबास सहरको व्यस्त गल्लीमा एक्लिएको यो भव्य घर अरुण साहको हो, जसले पाँच वर्षीया बालिका गुलावसा खातुनको एक वर्षअगाडि बलत्कारपछि हत्या गरेको थियो ।
साह कानुनअनुसार जेलमा आजीवन सजाय भोगिरहेका छन् । साह जेल सजाय भुक्तान गरिरहँदा उनको घर, परिवार नै घृणा र आक्रोशको सिकार बनेका छन् । मंसिर २०७७ मा साहले पाँच वर्षीया बालिकालाई यही घरमा हत्या गरेर बोरामा हालेर बाहिर फ्याँकेका थिए । सोहीबेला स्थानीयहरूले यो घरमा आगो लगाए, साहको सम्झना हुनलायक सम्पूर्ण सामानहरू ध्वस्त बनाइदिए । त्यसपछि यो घर रित्तो बन्यो ।
देश/समाज‐मा वर्गिकृतmahottari, mahottarinews, nepali news, nepali news portal, News Nepal, news nepali
काठमाडौं महानगरमा १९६ किलोमिटर कालोपत्रे गर्‍यौँ : मेयर शाक्य
साइक्लिङले पर्यावरण संरक्षण गर्न टेवा पुर्‍याउँछ : प्रचण्ड
प्राचिन वस्तु निकालिरहेका पाँच जना पक्राउ